सास बाड्ने अभियन्ता – Karnalibusiness
पुनम बि.सी. सुर्खेत - २५ बैशाख २०७८, शनिबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अहिले ‘सास बाड्ने’ समुह निकै क्रियाशिल छ ।
‘सुर्खेत कोभिड–१९ सेल्फ हेल्प समुह’ अहिले कोभिड–१९ संक्रमितहरुका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिन लागिपरेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण भारतमा परेको प्रभावले नेपालमा पनि क्रासको वातावरण सृजना ग¥र्यो । कोभिड संक्रमित बनेका भारतिय नागरिकहरु समयमै अक्सिजन नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपरेको जस्ता घटनाले नेपालको कर्णाली प्रदेशलाई पनि क्रासले झक्झकाईरह्यो ।
सुर्खेतमा वैशाख १४ गते रातिदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरियो । यस्तै दैलेख, कालिकोटलगायतका जिल्लाहरुले पनि विस्तारै निषेधाज्ञा जारी गरे ।
सुर्खेतमा पनि संक्रमितहरुको संख्या बढ्न थाल्यो । संक्रमणका कारण दिनहुँ नागरिकहरुले ज्यान गुमाउन थाले ।
यसै समयमा जन्मिएको हो, ‘सुर्खेत कोभिड–१९ सेल्फ हेल्प समुह ।’
समुहका एक सदस्य मिलन श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड–१९ संक्रमितहरुका लागि हामीले अक्सिजन व्यवस्थामा सघाउका लागि समुह बनायौँ । अहिले अक्सिजनको यो अभियानमा हामी पाँच जना जोडिएका छौँ ।’
अभियानको नेतृत्व पत्रकार सुदिप पुरीले गरेका छन् ।
समुहले अक्सिजनको सिलिण्डर अभाव हुन नदिन एक हजार रुपैयाँ संकलन अभियान थाल्यो । थन्केर रहेका खाली सिलिण्डरहरुको खोजी गरियो । नेपालगञ्ज पु¥याएर सिलिण्डरमा अक्सिजन भरेर पुनः सुर्खेत आईपुग्छन् सिलिण्डरहरु ।
अभियानका संयोजक तथा पत्रकार सुदिप पुरीले भने, ‘आज (शनिबार)सम्म संक्रमितहरुका लागि अक्सिजन अभियानमा दुई सय ४० जना जोडिनुभएको छ । देश विदेशमा रहनुभएका समाजसेवी मनहरुबाट सहयोग आएको छ ।’
समुहका सदस्य मिलन श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म चार लाख ५० हजार रुपैयाँ अभियान अन्र्तगत सहयोग उठिसकेको छ ।
अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव झेलेका २२ जना कोभिड–१९ संक्रमितहरुकालागि समुहले समयमै सिलिण्डरको व्यवस्था गरिसकेको समुहका संयोजक पुरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले खासगरी विपन्न समुदाय, पहुँच नभएकालगायतका नागरिकहरुका लागि अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग गरिरहेका छौँ ।’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको कोभिड अस्पताललाई समेत समुहले १० थान अक्सिजनको सिलिण्डर सहयोग गरेको छ ।
यसका साथै प्रदेश अस्पतालको आईशोलेसन क्षेत्रमा रहेका विरामी तथा विरामी कुरुवाहरुका लागि समेत खाजाको प्रवन्ध गरिरहेको समुहका संयोजक पुरीले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कुनै संक्रमितहरुको मृत्यु भएमा सेनाको टोलीले आर्यघाट पु¥याईदिन्छ । त्यो अवस्थामा हामीले विपन्न समुदायका परिवारलाई लक्षित गरी दाउरा खरिदलगायतमा सहयोग गर्न पाँच हजार रुपैया समेत सहयोग गर्ने गरेका छौँ ।’
‘सुर्खेत कोभिड–१९ सेल्फ हेल्प समुह’मा अहिले संयोजक पुरीलगायत मिलन श्रेष्ठ, धर्मराज आचार्य, खगेन पुरी र प्रवाशकुमार शाक्य सक्रिय भई लागिरहेका छन् ।
के छ अक्सिजनको अवस्था ?
कोभिड अस्पतालहरूमा अक्सिजनको माग साबिकभन्दा दोब्बरले बढेको छ ।
अन्य अस्पतालभन्दा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले अक्सिजनको संकट बढी नै झेल्नुपरेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका कोरोना फोकल पर्सन डा. केएन पौडेल बताउछन् ।
अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सुरु भएपछि हाललाई स्थिति केही सामान्य छ तर कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गए अहिलेको क्षमताले धान्न नसक्ने उनले जनाए ।
भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीलाई दुई÷तीन घण्टामा एउटा अक्सिजन सिलिन्डर फेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश अस्पतालमा आइतबारदेखि दुई वटा अक्सिजनका प्लान्ट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तत्कालका लागि केही सहज भए पनि यही दरमा संक्रमित थपिए त्यसले मात्र थेग्ने अवस्था नरहेको डा. पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोना लगायत अन्य बिरामीका लागि दैनिक एक सय ३० वटाभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने अस्पतालले जनाएको छ । नेपालगञ्जबाट पनि मुस्किलले एक सय वटा सिलिन्डर आउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णालीका अनुसार प्रदेशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा साना÷ठुला गरी पाँच सय ६४ वटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । आफ्नै प्लान्ट सञ्चालन गरेका केही अस्पतालमा पाइपलाइनबाट पनि बेडसम्म अक्सिजन सप्लाई गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा जम्मा ७० वटा अक्सिजनका सिलिन्डर रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बताए ।
अस्पतालमा शुक्रवारसम्म ७४ जना कोभिडका संक्रमित भर्ना भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई जटिल समस्या छ । सबै बिरामीलाई अक्सिजन लगाएर उपचार गर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा चार जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
बगैँचा निर्माणका लागि ८७ जना स्थानीयबाट लिजमा लिइएको एक लाख ५० हजार बर्गमिटरमा फैलिएको नमुना बगैँचामा एकैसाथ शुक्रवार ३० हजार फुजि स्याउका बिरुवा रोपिएको छ ।